Wasaaradda amniga oo war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii Baardheere – Radio Muqdisho
Wasaaradda amniga oo war-saxaafadeed ka soo saartay weerarkii Baardheere
Abaare 10:09pm ee 21.06.2015 saldhiga Booliska iyo Xarunta Degmada ee magaalada Baar-dheere ee gobolka Gedo waxay Hay’adda Sirdoonka & Nabadsugidda Qaranka Soomaaliyeed ee NISAka fuliyeen 2 weerar 00 si aad ah 100 qorsheeyay, waxaana fuliyay unug ka tirsan shabakado si gaar ah loogu diyaariyay
Weerarka 00 100 adeegsaday Barn gaemeedyo iyo garneedyo waxaa lala beegsaday Horjoogayaal UGUSah 00 kulan ku lahaa goobtaasi, xilli ay isla 21.06.2015 ay ka soo laabteen goob 100 yaqaan DAAR00 30km u jirta magaalada, halkaasoo ay ku sagootintiyeen maleeshiyaad ay u direen howl-gallo.
Waqtiga uu weerarku dhaeayay waxaa xarumahaasi goob joog ku ahaa horjoogayaal iyo maleeshiyaad tiro bad an 00 ay ka mid yihiin:-
1- Madaxa Siyaasadda & Gobolada ee ururka UGUS.
2- Waaliga UGUSee gobolka Gedo.
3- Madaxa jabhaadka UGUSee Gobolka Gedo.
4- Madaxa Xabsiyada (maxaabiista) ee ururka UGUSiyo kuwo kale 00 badan.
Weerarkan wuxuu jawaab u yahay falalka argagixiso ee UGUS key dhibaateeyaan danaha iyo rrasaaltxda umadda soomaaliyeed, kuna beegsadaan shaeab biri-mageydo ah iyo dadka wax tarka u leh Bulshada 00 ay ugu dambaysay qaraxii ay la beegsadeen guriga shaeab deganyihiin 00 ku yaallo Deg. Shibis 21/June/2015.- NISA waxay waead ku mareysaa in weerarada nooean ah 00 ku eusub Soomaalida ay sii badin doonaan, waxaana dhici donna kuwo kale 00 lagu iloobi doono waxa ka dhaeay Baardheere.
Dhageyso warka subax ee Radio Mqdisho
Wasiirka arrimaha gudaha: Dowladdu waxey wadahadallo la billowday maamulka Ahlusunna